Inona no atao hoe SMB? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny S	» SMB
SMB no fanafohezana ny Orinasa kely sy salantsalany.
Ny orinasa madinika sy salantsalany dia fikambanana manana habe manokana, na isan'ny mpiasa na vola miditra isan-taona. Raha refesina amin'ny isan'ny mpiasa, ny orinasa madinika dia ireo manana mpiasa latsaky ny 100 ary ny orinasa midadasika dia ireo fikambanana misy mpiasa 100 ka hatramin'ny 999. Raha refesina amin'ny vola miditra isan-taona izy ireo dia fikambanana manana fidiram-bola latsaky ny 50 tapitrisa dolara isan-taona sy antonony na fikambanana izay mahazo vola mihoatra ny 50 tapitrisa dolara nefa latsaky ny 1 lavitrisa dolara. Ny fanafohezana ny SME dia ampiasain'ny ivelan'i Etazonia.